हिमानी शाहले यसरी मनाईन् जन्मदिन! किन भयो पारसलाई निर्मल निवासमा नो इन्ट्री? (तस्वीरहरु हेर्नुहोस्) - Onlines Time
हिमानी शाहको चर्चा उनको सुन्दरताको कारण पनि हुने गर्दछ । पूर्व राजपरिवारको पछिल्लो समयको महत्वपूर्ण सदस्य हिमानी शाह अहिले आफ्नै नाममा ट्रष्ट खोलेर समाजसेवामा ब्यस्त छिन् ।
उनले आफ्नो ४५ औं जन्मदिन एक पारिवारीक जमघटमा मनाएकी छिन् । उनको जन्मदिन मनाउन हिमानीका छोरा हृदयेन्द्र, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाह देखिन्छन् । तर उनका छोरीहरु र उनका श्रीमान् उक्त तस्वीरमा देखिएका छैनन् ।
Prevजनकपुरमा जसपा कार्यकर्ताद्वारा अख्तियारवि’रुद्ध नाराबाजी
Next२१ बर्से छोरालाइ मु*टुमा छु रा रो पेरे यसरी मा’रिएको थियो अहिले बि*चल्लि ।(हेर्नुस भिडियो)